Umhla My Pet » Indlela uthabathe amanyathelo akho lokuqala Ukuthandana umxokozelo
Wena endilithathileyo uziphose yaye bakulungele ukuqalisa ukhangela ebalulekileyo nezinye online. Yi-umdla, ulwazi kodwa wayesaba. Ngequbuliso une ithuba lokuba babone kwaye basebenzisane singles ngaphezulu, ngaphezu kokuba wadibana kunyaka! Kodwa ulinde dating online ayikho into efana bahlangana nabantu umntu yaye ngokuqinisekileyo abufiki yencwadi a ...
Ukuqonda Vocab: Elinye lamanyathelo zokuqala kwaye ziyabhidisa uniphethe nokuya. La mathuba yokuqala yentsebenziswano, uhlobo bacinge ukuba ufuna ukuhamba na ehlabathini ukuba ukhethe njani ukuba ukwenza?
Kanye njani "ubomi benene" amagama esiwasebenzisayo ukuchaza uhlobo boqhagamshelwano, ezifana wandincumela, Azifumaneki acacise oko nje yenzeka phakathi kwabantu ababini. Le ngcamango nangoku usebenza iinketho zakho online:
Kanye - Cinga oku uncumo malunga bar. Isenokuba uthathe ingqalelo umntu. nokuba, oko kungabi njengoko sentsimini ngokungathi waya waza wathi, "Mholo."
iphanyazo uqhwanyazo -i uthunyelwa kanye njengokuba ngokukhawuleza njengoko liyachithwa.
Ncwadi - Lo kukuba umntu wayethetha ngayo kumgca e Starbucks. Wena waziva yintlantsi ilungelo kude; ewe wadibana nje udlula, kodwa awunako ukulinda ukuba ziyangqubana kubo kwakhona.
kwemiYalezo - Lo ngumyalezo okubhaliweyo ukusuka '' umntu sele belindele ukuva usuku lonke. Kwaye ngokupheleleyo kuwe.
Ukwenza ukhetho malunga ukunxibelelana indlela ukufumanisa uhlobo abasabela ufumana.
Yothuse kwaye bothusa: Ukuba ufuna ukufunda profiles ezimbalwa phambi kokubhala yeyakho, Kulungile.
– Ukuba kunzima ukwazi ukuba ukufaka imboniselo yabucala kangakanani xa sele ezintsha ukuphola online. Ngaba nani nifuna ukuba ubhale oniku, kodwa awufuni wamzalela abantu iinyembezi kunye iinkcukacha kwibakala 5 yakho ipiyano recital.
– Qinisekisa ukunika iinkcukacha zobuqu, kukho iwaka ngabantu abathanda iimovie 'ofuna ukufumana neqabane ulwaphulo,'Into eyahlukileyo ngokwenene ngawe? (Ngaba uya esikolweni khekhe kwaye sisebenze ngoku zokumaketha. mhlawumbi, Kutshanje sowuthathile parasailing?)
– Chaza into oyikhangelayo kwiqabane, ukuba akufuni abantu banokucinga iprofayile yakho ukuqhatha.
Yiba Nesibindi: Kokuba wajoyina ukuthandana online ukuba abe wallflower, ufuna ukufumana umntu!
– Akukho nto uza kuphulukana! Ngawaphi amathuba uya kuqhuba kulo mntu? Kwiqanda ukuya nanye; musa asikuqwabazeli kubo, ukuba okunene ufuna umyalezo.
– Musa ukuvumela ukuthandabuza ongaphakathi uwine. Ngeke wazi ukuba ngubani na ukuba nomdla kwakho, ngahandle kokuba nguwe osinike yona itrayi. Awuzange ukujoyina ukuthandana online ukuhlala ekoneni, ubandakanywa awuzange? Ukuba awuzange, Ndicinga ukuba kwiwebhusayithi engalunganga.
Zama into entsha: Akukho nto iphosakeleyo nokwazi "uhlobo yakho,"Kodwa zama ukuthetha nomntu yahlukile kubudlelwane bakho elidlulileyo.
Xa amawaka iinketho bajonge kuwe ukusuka yakho yegolide ekhompyutheni, akukho nto iphosakeleyo sokuhlola amanzi ukuba ufunde oko ufuna. mhlawumbi, usiya ngomhla kunye ngumhlekisi kwaye ziphumeze, "Nje Andikwazi ukuhlala nomntu honks iimpumlo zabo ophilayo." Akukho nto iphosakeleyo kuloo, okanye mhlawumbi ufunde yiloo nto sele silindele lonke. Awazi ukuba into yenzeke.
Yiba nguwe: njengoko Dr. Seuss wayibeka, "Mna ndinguye endinguye kwaye Yinto enkulu ukuba." Ukuba uGqirha. Seuss wathi, umelwe ukuba ekunene. Kunzima ukuqalisa ulwalamano kunye nomntu xa uzama ukuba uzenze mntu wumbi.
Ewe "hottie8675309" linomtsalane kakhulu, kodwa awunako ukufumana nantoni na profile zabo enifana. Wena ucinga ukuba wena, "Kulungile ke igama 'Iidiliya zengqumbo ' njengoko neyona ncwadi. Ndicinga ndafunda ukuba kwisikolo esiphakamileyo. "Ngaphambi kokuba uyazi wena ngomhla nomntu owabhala yePhD ekwenziweni yabo PhD kwi 'Iidiliya yengqumbo. ' Sininqwenelela okuhle ukuba!